Floorlọ ọgwụ dị n'ala disinfection na nhicha-News-Topflor China nwere oke
Tọrịa ọhụụ ọhụrụ anọgidewo na-agba ụka. Dị ka agha bụ isi nke agha ọgụ, ụlọ ọgwụ dị ezigbo mkpa maka igbochi na igbochi ọrịa chọrọ nje na nje. E nwere ọtụtụ ụzọ nke ofufe ọrịa nke okpueze ọhụrụ. Na mgbakwunye na ịgbasa site na ụmụ irighiri mmiri, ọ na-esite na kọntaktị aka na-agbasa n'elu ebe gburugburu. Ya mere, iji gbochie mgbasa nke ọrịa obi na-efe efe na ụlọ ọgwụ, ndị mmadụ kwesịrị ịme nchedo onwe ha na mgbakwunye na disin ọgwụ n'ụlọ ọgwụ mgbe niile, dịka akwa ụra, ndị nlekọta, ụzọ, ụlọ mposi, na ọbụna ala n'okpuru ụkwụ ha niile ụbọchị. Hichaa ma kpochaa ọgwụ ahụ mgbe niile.
Dịka ebe ọha na eze nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ juru eju na nnukwu agagharị, ndị mmadụ na-agakarị n’ala ụlọọgwụ. Ngwa nhicha ma ọ bụ ụgbọ ala na-adịkarị na kọntaktị na ụlọ ọgwụ. Kedu ka ekwesịrị isi hichaa ala a na-ejikarị eme ihe? N'ime oge dị oke egwu nke igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa, olee otu esi eme disinfection na sterization nke ụlọ ọgwụ?
Abịa n’ịgbasa ọgwụ na ịmị nwoke nke ala ụlọ ọgwụ, ihe mbụ na-abata m n’uche bụ ọgwụ nje 84. N'oge a, ọtụtụ ihe ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ na-ahọrọ ala ịkwanyere n'ala PVC. PVCfọdụ PVC ala ebupụta ka emepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji nwee ezigbo acid na alkali na-eguzogide, abrasion eguzogide, ọkọ eguzogide, mgbochi ayodiin na ndị ọzọ Njirimara, mgbe-eguzogide ọgwụ dị iche iche Chemicals, ọ nwekwara ike iguzogide infiltration nke dị iche iche disinfectant detergents. Anyị nwere ike ịnwe obi ike wee jiri nkwuwa okwu meghachi ọrụ disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ. Floordị ihe ndị a bụ ezigbo ụlọ ọgwụ.
Agbanyeghị, ụfọdụ ala PVC anaghị arụ ọrụ pụrụ iche nwere ike ịnagide ụfọdụ ngwaahịa nhicha dị nro. N'okwu a, a ga-egbochi mgbochi nile n'ala. Ka emechara, ọtụtụ disinfectants na-emebi emebi. Ọ ga - emebi mbibi a na - apụghị ịgbagha agbagha na ala PVC, ọ ga - emetụta mmetụta ojiji na aesthetics. N'ọnọdụ dị otú a, anyị nwere ike itughari ọgwụ mgbochi 84 wee jiri ya na nhicha ala plastik, mana enweghị ike iji ya ugboro ugboro. Ya mere, nhọrọ nke ihe ndị dị n'elu na oghere n'oge usoro ịchọ mma dị ezigbo mkpa, karịsịa maka ala ụlọ ọgwụ.
Mgbochi mgbochi disinfection nwere ike hụ na nchekwa nke ndụ na ahụike. Na mgbakwunye na 84, anyị nwekwara ike ịhọrọ hydrogen peroxide disinfectants maka disinfection, nke nwekwara ike nweta mmetụta disinfection. Naanị site na ịme mgbochi ka a ga-ezere mgbasa nke ọrịa obi na-efe efe.